အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဓာတ်မှန်၊ | Fujifilm Myanmar
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဓာတ်မှန်၊
Image shot on the IP is read on the PROFECT CS/ONE image reader which employs dual-side reading technology witharesolution of 50µm. The Console Advance then automatically optimizes the image for diagnosis. This device also supports diagnosis using such high image processing technology as the blackening of white areas, MFP-DRC (clearly displays the skin line by adjusting the direct range of the image density).
ဤ ကူးယူသိမ်းထားနိုင်သည့် PDF လက်ကမ်းစာစောင်များတွင်လည်း ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကို ပိုမို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
You are here:ပင်မစာမျက်နှာ> ထုတ်ကုန်များ> ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စနစ်များ> အထူးပြု စနစ်များ > အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဓာတ်မှန်၊